Rio Ferdinand Oo U Sheegay Solskjaer In La Gaadhay Waqtigii Harry Maguire Laga Saari Lahaa Safka Manchester United - Gool24.Net
Rio Ferdinand Oo U Sheegay Solskjaer In La Gaadhay Waqtigii Harry Maguire Laga Saari Lahaa Safka Manchester United
Halyeygii difaaca Manchester United ee Rio Ferdinand ayaa u sheegay tababare Ole Gunnar Solskjaer in la gaadhay waqtigii booska joogtada ah laga qaadi lahaa kabtanka kooxdaas ee Harry Maguire.
Difaacan hore ee United ayaa rumaysan in Maguire uu u baahan yahay in kaydka loo diro kaddib qalalaasihii uu ku jiray muddooyinkii ugu dambeeyey, kuwaas oo ay ugu dambaysay kaadhkii casaa ee uu qaatay kulankii Denmark oo qaybtii hore laba ficil ee uu sameeyey lagaga saaray ciyaarta.
Ferdinand waxa uu rumaysan yahay in Maguire ay ka luntay kalsoonidii uu ku ciyaarayay, loona baahan yahay in kaydka la dhigo si uu maskax ahaan ugu nasto oo culayskan badani ka dego, waxaanu yidhi: “Way iska caddahay oo waa la arkayaa inuu ku jiro waqti xun. Qofna xasaanad kama haysto waqtiyada qaabkooda iyo kalsoonidooduba hoos u dhacu ku yimaaddo.
“Haddii aad doonayso inaad si fiican u ciyaarno, inaad haysato kalsoonidaas ayaa lama huraan ah. Isagu ma haysto kalsoonidaas, waxaanay aad uga muuqataa ciyaartiisa.
“Xaaladahan oo kale aniguba waan soo maray, mararka qaarkood waxaad u baahan tahay in saaxadda laga saaro.”
Rio Ferdinand waxa kale oo uu tilmaamay in marka ciyaartoyga uu culays saaran yahay ee ay indhaha oo dhani kusoo jeedaan, ay u fiican tahay in uu ka yara baxo kooxda koowaad si uu u helo waqti uu dib iskugu fiiriyo, kalsoonidana dib ugu soo ceshado.
“Mararka qaarkood inaad naftaada ka saarto furinta dagaalku adiga ayay ku caawinaysaa. Waxaad helaysaa waqti aad ku falceliso, fursad aad iskula fadhiisano oo aad ku qiimayso halka aad taagan tahay. Laakiin marka aad si joogto ah u ciyaarayso, saddexdii ama afartii maalmood ba aad hal mar dheelayso, aad ayay u adag tahay inaad aragto gol-daloolooyinka.” Ayuu mar kale yidhi Ferdinand.